16 Ya mere, mgbe ụbọchị izu ike+ gafere, Meri Magdalin,+ na Meri nne Jems, na Salomi zụrụ ihe na-esi ísì ụtọ ka ha gaa tee ya.+ 2 N’isi ụtụtụ n’ụbọchị mbụ+ n’izu ahụ, ha bịara n’ili ncheta ahụ, mgbe anyanwụ wara.+ 3 Ha nọkwa na-agwa ibe ha, sị: “Ònye ga-akwapụrụ anyị nkume n’ọnụ ụzọ ili ncheta ahụ?” 4 Ma mgbe ha leliri anya, ha hụrụ na a kwapụwo nkume ahụ, ọ bụ ezie na o buru oké ibu.+ 5 Mgbe ha banyere n’ili ncheta ahụ, ha hụrụ nwa okorobịa nọ ọdụ n’akụkụ aka nri bụ́ onye yi uwe mwụda ọcha, o wee ju ha anya.+ 6 Ọ sịrị ha: “Ya ejuzila unu anya. Unu na-achọ Jizọs onye Nazaret, bụ́ onye a kpọgidere n’osisi.+ A kpọlitewo ya,+ ọ nọghị n’ebe a. Leenụ ebe e liri ya!+ 7 Ma gaanụ gwa ndị na-eso ụzọ ya, gwakwa Pita, sị, ‘O buruwo unu ụzọ gawa Galili;+ n’ebe ahụ ka unu ga-ahụ ya, dị nnọọ ka ọ gwara unu.”’+ 8 Ya mere, mgbe ha si n’ili ncheta ahụ pụta, ha ji ọsọ gbapụ, n’ihi na ha na-ama jijiji, nọrọkwa ná mgbagwoju anya. Ọ dịghịkwa onye ha gwara ihe ọ bụla, n’ihi na egwu na-atụ ha.+ MMECHI DỊ MKPIRIKPI Ihe odide na nsụgharị ochie ụfọdụ nwere mmechi dị mkpirikpi nke sochiri Mak 16:8, nke kwuru, sị: Ma ha kọọrọ ndị nọ Pita gburugburu ihe niile e nyere n’iwu ná nkenke. Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jizọs zipụrụ ha ka ha gaa zisaa ozi banyere nzọpụta ebighị ebi, nke dị nsọ, nke a na-apụghịkwa ibibi ebibi, site n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. MMECHI DỊ OGOLOGO Ihe odide ochie ụfọdụ (Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi, Codex Bezae) na nsụgharị ochie ụfọdụ (Latin Vulgate, Curetonian Syriac, Syriac Peshitta) gbakwụnyere mmechi dị ogologo, bụ́ nke na-adịghị na Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, akwụkwọ Sinaitic Syriac, na Nsụgharị Armenian, sị: 9 Mgbe o biliri n’isi ụtụtụ, n’ụbọchị mbụ n’izu ahụ, o bu ụzọ pụta n’ihu Meri Magdalin, bụ́ onye ọ chụpụrụ mmụọ ọjọọ asaa n’ahụ́ ya. 10 Nwaanyị ahụ gara kọọrọ ndị ha na Jizọs na-anọ, ka ha nọ na-eru uju, na-akwa ákwá. 11 Ma mgbe ha nụrụ na o bilitewo n’ọnwụ nakwa na nwaanyị ahụ hụrụ ya, ha ekweghị. 12 Mgbe ihe ndị a gasịrị, ọ pụtara n’ọdịdị ọzọ n’ihu mmadụ abụọ n’ime ha ndị na-aga n’ụzọ, ka ha na-abanye n’ime obodo; 13 ha wee laghachi, kọọrọ ndị ọzọ. Ha ekweghịkwa ihe ndị a kwuru. 14 Ma mgbe e mesịrị, ọ pụtara n’ihu mmadụ iri na otu ahụ mgbe ha nọ na-eri ihe na tebụl, o wee katọọ enweghị okwukwe ha na obi ịkpọ nkụ ha, n’ihi na ha ekweghị ihe ndị ahụ hụrụ ya ugbu a e si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite ya kwuru. 15 O wee sị ha: “Gaanụ n’ime ụwa dum kwusaara ihe niile e kere eke ozi ọma. 16 A ga-azọpụta onye kweere, nke e mekwara baptizim, ma a ga-ama onye na-ekweghị ikpe. 17 Ihe ịrịba ama ndị a ga-esokwa ndị kweere: Ha ga-eji aha m chụpụ ndị mmụọ ọjọọ, ha ga-ekwu okwu n’asụsụ dị iche iche, 18 ha ga-ejikwa aka ha chịlite agwọ, ọ bụrụkwa na ha aṅụọ ihe ọ bụla na-egbu mmadụ, ọ gaghị emerụ ha ahụ́ ma ọlị. Ha ga-ebikwasị ndị na-arịa ọrịa aka n’isi, ahụ́ adị ha mma.” 19 Ya mere, mgbe Onyenwe anyị Jizọs gwasịrị ha okwu, a kpọgoro ya n’eluigwe, o wee nọdụ ala n’aka nri Chineke. 20 N’ihi ya, ha pụrụ wee na-ekwusa Alaeze ahụ n’ebe niile, ka Onyenwe anyị so ha na-arụ ọrụ ma na-akwado ozi ahụ site n’ihe ịrịba ama ndị na-eso ya.